Wednesday November 15, 2017 - 10:46:43 in Wararka by Super Admin
Iyadoo qeyb ka ah isbedelka horay loogu qaaday dhanka calmaaniyadda ayay xukuumadda Sacuudig waxay martiqaad rasmi ah u fidisay Baadariga Kaniisadda ugu weyn ee dad Nasaarada ah ku leeyihiin mandiqadda Bariga dhexe marka laga reebo wadanka Masar.
Markii ugu horraysay 42 sanadood kadib waxaa dhulka xarameynka ee Sacuudiga loo yaqaan Booqasho ku tagay Baadari kaniisadeed, magaalada Riyadh waxaa shalay gaaray madaxa Kaniisadda The Patriarch Maarooni ee kutaal wadanka Lubnaan Ninka lagu magacaabay Bishaara Al-raaci.
Max’med Bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha koowaad ee Boqortooyada Sacuudiga ayaa soo dhaweyn aan horay loo arag usameeyay Baadiriga Kaniisadda Lubnaan wuxuuna ku tilmaamay Nin saaxiib la ah dowladda Sacuudiga.
Wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa faafisay qoraal ay ku faah faahinayso waxa ay ka wada hadleen mas’uuliyiinta Sacuudiga iyo Baadariga Kaniisadda "The Patriarch" ee ugu weyn Bariga dhexe.
Wakaaladda Wararka Sacuudiga ayaa faafisay waxa ay ka wada hadleen Bin Salaam iyo Baadari Bishaara Al-raaci " labada dhinaca waxay ka wada hadleen muhiimada ay leedahay doorka diimaha iyo dhaqamada kala duwan ee lagu kobcinayo dulqaadka, ka dhiidhinta rabshadaha iyo xagjirnimada iyo argagixisanimada, si loo gaaro nabadgelyo iyo deganaan caalamka loogusoo dabaali lahaa barwaaqo” ayaa lagu yiri warka kasoo baxa sacuudiga.
Sanaddii 1975 ayaa ugu dambeysay Sacuudiga in uu booqasho ku tago Nin Baadari Nasraani ah, wakaaladda wararka Reuters oo tacqliiq kooban ka bixisay socdaalka Baadarigan ayaa tiri "Booqashada uu wadaadka Masiixiyiinta Lubnaan ku tagay Riyadh ayay falanqeeyayaashu ku sheegayaan mid Taariikhi ah oo muujinaysa Furfurnaanta diineed ee ay ku dhaqaaqday Boqortooyada Sacuudiga”.
Tani waxay hordhac u tahay isbedel ballaaran oo bishii lasoo dhaafay uu ballan qaaday dhaxal sugaha Sacuudiga oo aheyd in uu wadanka ku faafinayo nidaamka diin la'aanta uuna dhuunta qabanayo wax uu ugu yeeray Xagjrnimada oo uu ula jeedo dadka muslimiinta ee doonayo in ay ku dhaqamaan shareecada islaamka.
Sidoo kale R/wasaarihii iscasilay ee xukuumadda dabadhilifka Lubnaan Sacad Alxariiri ayaa magaalada Riyaadh kula kulmay Baadariga Nasaarada Bariga dhexe waxayna ka wadahadleen xiisadaha dhanka siyaasadda ah ee kajira wadankaasi tan iyo markii uu iska casilay hoggaaminta xukuumadda horraantii bishan.